Evangelistisches Verteilheft Twi (Ghana)
Traktat Twi (Ghana)
Nhyira ne wↄn a ...
Mfasoↄ biara nni onipa brɛ a ↄrebrɛ bebree, sɛ ↄde behunu deɛ nti a ↄwↄ ewiase yi mu. Anamↄntuo biara a onipa tuo wↄ ↄsom ahodoↄ mu, ne nnwuma pa mu, sɛ ↄbɛhunu Onyankopↄn nso yɛ ↄkwa. Wↄre hwɛhwɛ Onyankopↄn wↄ abↄdeɛ ne honam mu mpɛnsɛnpɛnsɛn mu nso yɛ ↄbrɛguo. Nnipa wↄ atenka bi sɛ ↄne Onyankopↄn ntam kwan no asi. Ɛno nti onipa nni asomdwe. Mmerɛ nyina mu nnipa pre hwehwɛ Onyankopↄn. Nnipa nni ahotↄ, na adwendwene ne kↄda a ɛnna ato nnipa akoma so, ma ↄde ahometeɛ pre hwehwɛ akwan nyina mu sɛ ↄbɛsan abɛn Onyankopↄn, na ne nsa asan aka Onyankopↄn Paradise no bio. Ɔbↄↄ adeɛ Onyankopↄn no nsa ano ahyɛnso wↄ onipa biara so. Ɔbↄↄ yɛn ma ↄno Onyankopↄn no ara pɛ so. Yɛn nne yɛn ho akwan biara so. Yɛte ase ma Onyankopↄn.
Obiara rentumi nhwehwɛ, anaa rentumi mmisa asetena yi mu nkyeraseɛ wↄ aberɛ a ↄmmisa Onyankopↄn. Etwasɛ dɛn ara a gyesɛ wo hunu ↄbↄ adeɛ Onyankopↄn no ansa.
Onyankopↄn de ewiase ahyɛ onipa akomam.
(Ɔ s ɛ n k a f o 3:11)
Twikasa mu no Nwoma yi na edi kan